Inkululeko ye-Accrisoft: Uhlobo olwahlukileyo lwe-CMS | Martech Zone
Inkululeko ye-Accrisoft: Uhlobo olwahlukileyo lwe-CMS
NgoMvulo, Februwari 22, 2010 NgeCawa, uJuni 28, 2015 UMichael Reynolds
Uninzi lwewebhusayithi zangoku zisebenzisa i-CMS (Inkqubo yoLawulo lweMxholo) ukuvumela abalawuli bewebhusayithi ukuba benze utshintsho, bathumele umxholo, kwaye balawule iwebhusayithi. Oku kuthelekiswa neentsuku zakudala zokubiza iarhente yoyilo lwakho ukuba lwenziwe utshintsho, olunokubiza kakhulu kwaye lubangele ulibaziseko kuhlaziyo. Ngelixa Ulawulo lwewebhusayithi Ngaphambili ibingumbuso wabantu abanezakhono eziphezulu (ngamanye amaxesha abizwa ngokuba “zii-webmasters”), i-CMS ivula ulawulo kumalungu angengobugcisa bombutho, njengomlawuli wezentengiso, umncedisi wezolawulo, okanye i-CEO.
At I-SpinWeb, senza iindawo kwi Inkululeko yeAccrisoft iqonga. Inkululeko yi-CMS eyahlukileyo kancinci kwaye inezibonelelo ezintle kakhulu kunabanye babadlali. I-Indianapolis ibonakala iyidolophu yeWordPress kwaye ndibona iinkampani ezininzi ziyisebenzisa njengeqonga lewebhusayithi. Akukho nto iphosakeleyo ngeWordPress kwaye enyanisweni yeyam ibhlog yakho kunye nendawo yokuthetha yakhiwe kwiWordPress. Nangona kunjalo, iNkululeko inezibonelelo ezithile ezahlukileyo xa kuziwa ekusebenziseni, ubunzulu beempawu kunye nenkxaso. Ndiyayonwabela into yokuba sahlukile kwaye sisebenzisa iNkululeko njengeqonga lethu lokuzikhethela, ngakumbi kwimibutho emikhulu efuna ngaphezulu kwamaqonga emithombo evulekileyo anokubonelela ngesiqhelo.
Inkqubo yokuLawulwa kweMixholo kunye neNkxaso
Inye into entle ngeNkululeko kukuba kunjalo ixhaswe ngokupheleleyo kwaye igcinwe yi I-Accrisoft. Kukho iqela lophuhliso elizinikeleyo elihlawulelwa ukwenza amanqaku amatsha, ukwandisa iimodyuli ezikhoyo, kunye nokujika ingxelo yabathengi kwiqonga elinika amandla imibutho ukuba inxibelelane kwi-Intanethi. I-Accrisoft yinkampani enkulu kwaye ndiye ndancokola kakhulu ne-CEO UJeff Kline malunga nekamva leqonga kwaye malunga neshishini kwi-Intanethi ngokubanzi.
Ikhowudi yenkululeko ikhutshelwa ngaphandle kwiserver esembindini eqinisekisa ukuba konke ukufakelwa kuyahambelana. Ngamaqonga amaninzi avulekileyo, imodeli eqhelekileyo kukuseta iiwebhusayithi ezingama-50 + ezahlukeneyo ezisebenzisa iiplagi-ins ezahlukeneyo, iinguqulelo, kunye neehacks ezithi emva koko zibe bubusuku bokuzigcina njengearhente. Inkululeko ivumela iSpinWeb ukuba ixhase kwaye igcine inani elingenasiphelo lewebhusayithi ngaphandle kokukhathazeka ngokungangqinelani phakathi kwabo. Ngenxa yokuba yonke isoftware ibanjelwe efini, abathengi bethu akukho mfuneko yokuba bakhathazeke ngokufaka isoftware kwiikhompyuter zabo. Banokungena ngokulula baye emsebenzini. Ukongeza, sinokuphucula iiwebhusayithi zabaxumi bethu kwimizuzu nje embalwa xa kukhutshwa iinguqulelo ezintsha zeNkululeko.
Ujongano oluBalaseleyo loMsebenzisi
Inkululeko ikwanonxibelelwano oluhle lomsebenzisi. Ngelixa amanye amaqonga emithombo evulekileyo anokubhidisa abasebenzisi bokuphela, inkululeko ibonakalisa ucoceko, ujongano olulula olwenza kube lula kakhulu kubantu abangengobugcisa ukuba baphathe iiwebhusayithi zabo.
Iimodyuli ezandisiweyo ze-imeyile, iiFom, i-E-commerce kunye nokunye
Inkululeko ibonelela ngeemodyuli ezinamandla ezidibanisa ngaphandle komthungo kwezinye iindawo zewebhusayithi. Umzekelo, iNkululeko ibandakanya eyakhelwe-ngaphakathi Imodyuli yokuthengisa nge-imeyile, enika abanini bewebhusayithi isisombululo esigqibeleleyo seNtengiso ye-imeyile eyakhelwe kanye kwiwebhusayithi. Ibandakanya iitemplate, ucwangciso, ulawulo lwababhalisi, kunye neenkcukacha-manani zokuhanjiswa ezakhelwe ngaphakathi. Ikwatsala idatha kwezinye iimodyuli ukuze abathengisi bakwazi ukuthumela amaphulo kuluhlu olwenziwe kwezinye iinxalenye zesiza, ezinje ngobhaliso lomnyhadala.
The Imodyuli yeefom Inkululeko inamandla amakhulu kwaye iyabambana nabakhi beefom ezizimeleyo ezikhoyo namhlanje. Ngenkululeko, abalawuli bewebhusayithi abangasebenziyo banokwakha iifom ezintsonkothileyo (okanye ezilula) zezicelo, ukubhaliswa komsitho, iminikelo, kunye nokukhokelela ekubanjweni konke ngonqakrazo olumbalwa. Idatha yefom inokucutshungulwa kwaye ithunyelwe kwelinye ilizwe ngeendlela ezahlukeneyo okanye idityaniswe kwinqwelo yokuthengela usetyenziso lwe-e-commerce oluphambili.
Eyakhelwe kuyo isikhoji sokuthenga Inkululeko ikwavumela amashishini ukuba athumele isisombululo esidityanisiweyo se-e-commerce kwiiwebhusayithi zabo kwaye bathengise iimveliso ngenzame encinci. Oku kunokwandiswa kubhaliso lomnyhadala, ukuvumela imibutho ukuba ithengise ubhaliso kwiminyhadala kwaye yamkele ikhadi lekhredithi okanye ukujonga iintlawulo kwi-Intanethi.
Inkululeko ineemodyuli ezakhelweyo IiBlogs, iiKhalenda zeMisitho, iiNdaba zoKhuphelo, iiPodcasts, iiForam, izalathiso, iRSS, iiNkqubo zokudibana, ukuTyala, kunye neePolls, ukubiza nje ezimbalwa kwezinye iindlela ezikhethiweyo kwinkqubo. Ukongeza, uninzi lweemodyuli zinokudibanisa kunye nenethiwekhi yoluntu ekhokelayo, oko kuthetha ukuba uhlaziyo lwewebhusayithi lunokuzenzekelayo lutyhale ngqo kwi-Twitter, Facebook nakwi-LinkedIn.
Inkululeko yinkqubo ekhuselekileyo. Ayisiyo kuphela isicelo esivivinywe kakuhle kwaye esomeleleyo, kodwa ikwanendlela efanelekileyo yokulawula abasebenzisi abaninzi, evumela abaphathi bewebhusayithi ezininzi ukuba babe neendima ezahlukeneyo kunye namanqanaba okufikelela. Ikwanemodyuli yokuHamba koMsebenzi, evumela abahleli ukuba bavume okanye balugatye utshintsho ngaphambi kokuba baphile.
Iindawo zoMbutho wobulungu
Ndingavuya xa ndingakhange ndibonakalise isisombululo esifanelekileyo senkululeko kwimibutho esekwe kumalungu, njengemibutho. Imodyuli yamaLungu eNkululeko ivumela amaqela asekwe kumalungu ukuba alawulwe ngokupheleleyo indawo egciniweyo yamalungu kwaye avumele loo malungu ukuba agcine iiakhawunti zawo kwaye enze uhlaziyo kwiwebhu. Imodyuli ikwavumela ukubizwa kwamalungu, iCRM, ukuthengisa kunye nonxibelelwano. Amashishini anokuyisebenzisa njengesiseko sedatha yabathengi kwaye eneneni isiseko sedatha yabathengi beSpinWeb kunye nenkqubo yamatyala ilawulwa ngeNkululeko, igcwaliswe nge-invovo ye-imeyile, ukubhatala okuphindwayo kunye nentlawulo ekwi-Intanethi.
Njengoko ubona, enye inzuzo enkulu yokusebenzisa iNkululeko kukuba yonke into ikwindawo enye. Ngaphambi kokuba sisebenze nathi, uninzi lwabathengi bethu lwalusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zokuthengisa nge-imeyile, i-e-commerce, ukubhloga, ukubhalisa umcimbi, umxholo wewebhu, kunye nolawulo lobulungu. Emva kokutshintshela kwiNkululeko, bayakuthanda ukusebenziseka kunye nokusebenza ngokukuko (singasathethi ke ngeendleko zokonga) zokuba nayo yonke into endaweni enye.
INjini yoPhando yeNkqubo yokuLawulwa koMxholo
Inkululeko ikwanobubele kwiinjini yokukhangela. Iiwebhusayithi ezisekwe kwinkululeko zisebenzisa ii "HURLs" (Ii-URL ezifundeka ngabantu) oko kuthetha ukuba umxholo unokufakwa kwisalathiso ziinjini zokukhangela ngokulula ngakumbi. Ii-HURL zinceda ukukhulisa indawo ekumgangatho wewebhusayithi kwiinjini zokukhangela kwaye zijongeka ngcono kakhulu ebantwini kunee-URL eziqhutywa zedatha kwezinye iinkqubo ezininzi. Ii-HURLs kwiNkululeko zenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo.
Njengomboneleli ogunyazisiweyo weSisombululo seAccrisoft, iSpinWeb iyakwazi ukuhambisa iiwebhusayithi ngokukhawuleza okukhulu kunye nomgangatho ofanayo ngalo lonke ixesha ngenxa yomgangatho wethu kwiNkululeko. Abaxhasi bethu bayakuthanda ukusetyenziswa ngokulula, ukudityaniswa okunamandla, kunye nenqanaba lolawulo abanalo ngoku xa belawula iwebhusayithi yabo.
tags: eyekisoinkululeko accrisoftCMSInkqubo yolawulo lomxholoispinweb
Juni 20, 2011 ngo-2: 52 PM
Ndiyayithanda iCMS yeNkululeko! Isithuba esihle.